Askar Yahuud Ah Oo Gaari Lagu Jiirsiiyay Magaalada Ramallaah. – Calamada.com
Askar Yahuud Ah Oo Gaari Lagu Jiirsiiyay Magaalada Ramallaah.
calamada May 4, 2016 2 min read
Ciidamada Yahuudda ayaa toogasho ku dilay ruux Filastiini ah, kadib markii gaari uu ninkaas kaxeynayay uu jiirsiiyay Koox Askar ah oo ku sugneyd meel ku dhow magaalada Ramallaah ee daanta galbeed.
War kasoo baxay Ciidamada Sahyuuniyadda ayaa waxay ku sheegeen in Shilkaasi ay ku dhaawacmeen ugu yaraan Seddax ruux oo Yahuud ah, iyadoona mid ka mid ah uu dhaawiciisu yahay mid halis ah, waxaana loola cararay Isbitaalka, isagoona lagu qaaday diyaarad Helicopter ah oo ay leeyihiin Ciidamada Meliteriga.
Shilkani waxa uu imaanaya xilli maalintii shalay weerar kaligii-duulnimo ah oo ka dhacay magaalada Al-Qudus ee Caasimadda Filastiin lagu dhaawacay ruux Yahuuhi ah, iyadoona Booliiska Sahyuuniyaddu ay sheegeen inay xireen Wiil 19 jir ah oo ay ku eedeen inuu fuliyay weerarkaasi.
Dhallinyarada Filastiiniyiinta ah ayaa sii wada howl-gallada kaligii-duulnimada ah ee ay ku beegsanayaan dadweynaha Yahuudda ee xoogga lagu dejiyay dhulkooda, waxaana howl-galladani ay billowdeen bishii October ee Sannadkii hore, kadib markii Kooxo Yahuud ah ay xoog ku galeen Masjidka barakeysan ee Al-Aqsa.
Dhanka kalena Maxkamad taabacsan Kayaanka Sahyuuniyadda Â ayaa xukun xabsi daaâ€™in ah waxay ku ridday nin Yahuudi ah oo loo heysto in Sannadkii 2014-kii uu afduubay, islamarkaana uu dab qabadsiiyay wiil yar oo Filastiini ah oo ku noolaa magaalada Al-Qudus.
Wiilka yar ee Filastiiniga ah oo lagu magacaabi jiray Abuu Khudeyr waxaa la afduubay bishii July ee Sannadkii 2014-kii, waxaana kooxdii Yahuudda aheyd ee Wiilkaas afduubay ay kula kaceen Jirdil xooggan, iyagoo markii dambe korkiisa Shidaal ku shubay, kadibna dab qabadsiiyay, iyadoona falkaas uu dhacay xilligii uu socday dagaalkii xoogganaa ee dhexmarayay Kooxaha Muqaawamada Filastiiniyiinta iyo Ciidamada Gumeysiga Sahyuuniyadda.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 27-07-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Andalus 28-07-1437 Hijri.